Home » Travel Technology News » Ny CEO RAI Amsterdam dia nandefa ny hetsika 'Amsterdam City of Drones'
Paul Riemens, tale jeneralin'ny ivon-toeran'ny fivoriambe RAI Amsterdam, dia nanangana ny hetsika 'Amsterdam City of Drones' mifanindran-dàlana amin'ny Trade UAV Expo Europe amin'ity herinandro ity. "RAI Amsterdam dia mikendry ny ho mihoatra ny mpikarakara hetsika amin'ity sehatra ity," hoy i Riemens. "Ny tanjonay dia ny hanome sehatra fahalalana, fifandraisana ary fanavaozana satria tanjonay ny hanaovana an'i Amsterdam ho renivohitra drone an'izao tontolo izao."
Manamora ny fitomboana
Riemens dia mihevitra fa lojika tanteraka ny fandraisan'ny RAI Amsterdam andraikitra hitambatra ireo mpandray anjara mifandraika amin'izany. "Mitombo ny indostrian'ny drôna, ary mahita fotoana lehibe ahazoantsika mandray anjara amin'izany amin'ny alàlan'ny fanamorana ny fifanakalozan-kevitra, ny fanavaozana ary ny fifandraisana", hoy ny fanazavany. "Ny lalàna eropeana vaovao ho an'ny drôna dia hampidirina amin'ny taona 2019, izay manome tosika lehibe ho an'ity sehatra ity. Betsaka ny zavatra azo atao amin'ny resaka teknolojia, ary amin'ny taona ho avy dia haseho izay orinasa sy fikambanana ekena sy avela hatao amin'ireo teknolojia vaovao ireo, mihevitra ny olan'ny tsiambaratelo sy ny fiarovana. Miaraka amin'ny fifantohana amin'ny fanabeazana, ny fanavaozana ary ny haitao, ny tanànan'i Amsterdam dia fototra tonga lafatra hamondronana ireo lafiny rehetra ireo. Ankoatr'izay, ny RAI Amsterdam dia manana tamba-jotra lehibe ahafahantsika misintona. ”
Mampiasa amin'ny tambajotra fiaramanidina
Amin'ny maha Tale jeneraly teo aloha ny foibe fanaraha-maso ny fifamoivoizana an'habakabaka Luchtverkeersleiding Nederland, Riemens dia manana anjara biriky lehibe tokony hatao. Izy koa dia nitazona ny Fikambanana Serivisy ho an'ny Navigation sivily (CANSO), ny fikambanana elo manerantany mifehy ny fifamoivoizana amin'ny rivotra. "Miorina amin'ny zavatra niainako teo aloha dia fantatro ny fomba azo fehezina amin'ny fampiasana drôna. Ny fiarovana ny dia an-dranomasina no olana lehibe. ”
Riemens koa dia nanetsika ny fifandraisany ao amin'ny European Aviation Security Agency (EASA) sy ny Minisiteran'ny Infrastruktur sy ny fitantanana rano. Ny roa tonta dia handray anjara amin'ny Fihaonambe EASA avo lenta momba ny Drones mandritra ny Herinandron'ny Drone Amsterdam amin'ny faran'ity taona ity, manohana ny hetsika 'Amsterdam City of Drones'.
Ho fanampin'ny fahalalana sy ny hery vaovaon'ny faritra Amsterdam ary ny fandraisana anjara mavitrika amin'ny RAI, ny toerana misy an'i Amsterdam sy ny fotodrafitrasa dia manome tombony lehibe. Ny tanàna dia mora idirana amin'ny alàlan'ny seranam-piaramanidina Schiphol, ary manana fitateram-bahoaka tena tsara, trano fandraisam-bahiny voalohany ary be ny fotoana ilaina amin'ny singa fandaharana ara-tsosialy sy fanabeazana. "Ny manintona ny tanàna no zava-dehibe indrindra mandritra ny fandaminana ny hetsika," hoy i Riemens nanantitrantitra. "Izany no antony iray hafa mahatonga an'i Amsterdam ho safidy lozika ho foiben'ny indostrian'ny drôna."
Hetsika amin'ny taona 2018
Hetsika maro no efa voarindra tamin'ny taona 2018 teo ambanin'ny alàlan'ny 'Amsterdam City of Drones'. Ohatra, ny Commercial UAV Expo Europe, izay hatao ao amin'ny RAI amin'ny 10-12 aprily, dia hetsika eran-eropeana mifantoka amin'ny fampiasana indostrialy ny drôna amin'ny toe-javatra toy ny fiarovana, fotodrafitrasa ary ny fambolena. Taorian'ny fiandohan'ny fahombiazana tany Bruxelles tamin'ny taona 2017, nisafidy ny hitondra ny andiany faharoa any Amsterdam ireo mpikarakara.
Herinandron'ny Drone ao Amsterdam
Manomboka amin'ny 26 ka hatramin'ny 30 Novambra 2018, hetsika isan-karazany amin'ny sehatry ny drôna no hokarakarain'ny RAI eo ambanin'ny sainan'ny Amsterdam Drone Week (ADW). Ity sehatra fandraharahana ho an'ny orinasa ity dia natao ho an'ny orinasa rehetra miasa amin'ny sehatry ny UAS (Unmanned Aircraft Systems) na ireo izay mampiasa ny teknolojia mifandraika amin'izany. Ireo hetsika samihafa dia hifantoka amin'ny teknolojia, fampiharana ary anton-javatra toy ny tsiambaratelo, fitsipika, fiarovana ary filaminana.
EASA koa dia hikarakara ny Konferansa avo lenta momba ny Drones 2018 miaraka amin'ny Ministeran'ny fotodrafitrasa sy ny fitantanana rano mandritra ny ADW. ADW dia manasa ny fanombohana, ny mpandrindra, ny orinasa ary ny andrim-pianarana hizara hevitra sy fandraisana andraikitra.
"Mazava ho azy fa misy synergy mazava ho azy," hoy i Riemens namarana. “Hatramin'izao, ny ankamaroan'ny hetsika drone dia eo an-toerana ary natokana ho an'ny mpanjifa. Amin'ity fandraisana andraikitra ity dia te hamorona sehatra amin'ny sehatra manerantany izahay, manampy ny sehatra hivoatra amin'ny ankapobeny. ”